I-china evuselelekayo yokudla okuthengiswayo okungokwemvelo i-eco friendly i-100% ukotini ukhiqiza isikhwama se-canvas tote nge-gusset Umkhiqizi nomhlinzeki | Zhihongda
evuselelekayo i-organic grocery shopping eco friendly 100% ukotini ukhiqiza ikhanvasi tote bag ene-gusset
Lesi sikhwama siyindlela enhle uma ufuna izibambo ezinde ezinesakhiwo esakhelwe ezansi.
sinikeza isiqinisekiso sokwaneliseka esingu-100%. Uma unezinkinga ngalo mkhiqizo, sicela uxhumane nathi ukuthola insizakalo.
Izikhwama ze-Eco-Friendly tote ziyasebenza, ziyabola futhi ziyavuseleleka.
1. Lesi sikhwama siyindlela enhle uma ufuna izibambo ezinde ezinesakhiwo esakhelwe ezansi.
2. sinikeza isiqinisekiso sokwaneliseka esingu-100%. Uma unezinkinga ngalo mkhiqizo, sicela uxhumane nathi ukuthola insizakalo.
3 .. Izikhwama zamatokisi ezinama-Eco-Friendly ziyaphinda zisebenze, zonakaliswe ngamakhemikhali, futhi zibuye zisebenze kabusha.
4. Lesi sikhwama sokuphromotha sinezibambo ezizenzele ngokwakho ukuze ukwazi ukuphatha kahle ngesandla noma phezu kwehlombe lakho. Lesi sikhwama sesikhumba esikhanyayo esisindwayo, esingenalutho sinendawo eyodwa evulekile enkulu, i-3 "D Bottom Gusset, nomlomo ovuleke kakhulu kwenza kube lula ukulayisha nokulayisha izimpahla zakho.
5. Izikhwama zesikhumba ezisezingeni eliphakeme ezingasebenziseka zikulungele ukuyothenga ezitolo, isikole, umsebenzi, ukuhamba, ukuzivocavoca umzimba, ibhishi, isonto, i-DIY yangokwezifiso, ubuciko nobuciko, imihlobiso, imishado.
6.SIZE: Osayizi abahlukahlukene ongakhetha. Ilungele izidingo zokuphromotha, ukupha, ukukhangisa ibhizinisi lakho, imibukiso yezohwebo.
Igama lento evuselelekayo i-organic grocery shopping eco friendly 100% ukotini ukhiqiza ikhanvasi tote bag ene-gusset
Langaphambilini Izikhwama ze-12oz Heavy Duty Eco Travel Bag Ngaphakathi Kwelebula Yomkhiqizo I-Gusset Silkscreen Tote Bag Canvas Shopping Bag
Olandelayo: Isikhwama se-Drawstring esenzelwe wena
Kabusha canvas plain ukotini tote esikhwameni izibambo w ...
Fashion design ukotini yemvelo esindayo-duty ngendwangu ...
Ukuthenga ezitolo eco-friendly 100% ukotini canva ...
Ukuphrinta Shopping Ukotini ehlombe Uziphu Messen ...
Heavy Duty Reusable Ukotini Grocery Shopping Can ...
Nordic isitayela Eco Friendly Ulenga Ukotini Mesh R ...